Awarded By : UCSI University, Malaysia
Call Now : 09 400 070 909, 09- 777 046 368, 09- 777 046 369
UCSI University က ဘယ်လို တက္ကသိုလ်မျိူးလဲ ?
- QS World University Rankings မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၅၀၀ တွင် ပါဝင်ခြင်း - သက်တမ်း ၅၀ နှစ်အောက် တက္ကသိုလ်များတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၇၀ ( Top-70 of the World’s Best Young University) တွင် ပါဝင်ခြင်း
- Malaysia နှင့် Southeast Asia ရှိ Private University များတွင် 1st Ranked Private ဖြစ်ခြင်း - ဘွဲ့ရပြီးနောက် Graduate ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အများဆုံး ထိပ်ဆုံးကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခြင်း
- UCSI University တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၀ ကျော်မှ ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း တစ်သောင်းကျော် ပညာသင်ကြားနေကြခြင်း
- Miba University တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည့် Master in Business Administration ဘွဲ့ကို AACSB ၊ CPA Australia ၊ CIMA ၊ ACCA ၊ CISI ၊ CTMI, CFP နှင့် -- The Chartered Institute of Logistics and Transport ကဲ့သို့သော ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း
- နိုင်ငံတကာရှိ Partner Companies ပေါင်း ၄၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျောင်းသားအတွက် Career Coaching လုပ်ပေးခြင်းကြောင့် Career အတွက် အခွင့်အလမ်းများရှိခြင်း
- UCSI University မှ Intern ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို Partner Companies ကြီးများမှ Full-time အလုပ်ခန့်ထားမှုများတွင် 97.8 % ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေခြင်း
- နှစ်စဉ် UCSI University မှ ထူးချွန်ကျောင်းသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ Research Project များအတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် Havard University ၊ Imperial College London ၊ University of Chicago ၊ Tsinghua University နှင့် အခြားသော နာမည်ကြီး ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးရှိခြင်း
UCSI University ရဲ့ Master in Business Administration (MBA) က ဘယ်လို Program မျိူးလဲ?
- UCSI University ၏ MBA Program သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများကို လက်လှမ်းမှီစေရန် သင်ရိုးများကို အထူးစီမံရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ UCSI University ၏ MBA Program သည် လက်တွေ့ကျသော Strategy များ၊ နည်းစနစ်များဖြင့် လက်တွေ့ကျသော သင်ခန်းစာများကို အဓိကထားကာ သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- UCSI University ၏ MBA Program ကို Industry အသီးသီးမှ အတွေ့အကြုံရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ပညာရှင်များမှ သုသေတနပြုလုပ်ကာ အကြံပြုရေးဆွဲထားပြီး အတန်းတွင်း ဆွေးနွေးမှုများ၊ တင်ပြချက်များနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများမှ တစ်ဆင့် ဗဟုသုတများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသော သင်ကြားမှုပုံစံဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို လေ့လာသိရှိရမည့်အပြင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် အခြားသော ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းအရာများစွာကို လေ့လာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
1. Financial Accounting and Analysis (ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု)
2. Information Technology for Managers (မန်နေဂျာသုံး သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ)
3. Marketing Management (ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု)
4. Human Resource Management (လူ့စွမ်းအား စီမံခန့်ခွဲမှု)
5. Research Method for Business and Management (စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု သုတေသနနည်းပညာ)
6. Ethics and Corporate Social Responsibility (ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သဘောတရားနှင့်လူသားအကျိုးပြုဝတ္တရားများ)
7. International Business and Management (နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု)
8. Business Policy and Strategic Management (စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံခန့်ခွဲမှု)
9. Research Planning (သုတေသနဖော်ဆောင်ခြင်း)
10. Financial Management and Policy (ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မူဝါဒ)
11. Operations and Logistics Management (လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့့်ခွဲမှု)
12. Supply Chain Management (ကုန်စည်စီးဆင်းမှု နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
13. Master Coursework Project (Master Thesis) စသည့် အသုံးဝင်သော ပညာရပ်များကို Industry အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဝါရင့် Professor, Associate Professor ဆရာ/ဆရာမကြီးများက သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*Miba University တွင် UCSI University မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော Master in Business Administration (MBA) ကို 1 Year တက်ရောက်ပြီးနောက် Malaysia နိုင်ငံတွင် UCSI University မှ ကျင်းပသော ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား (Graduation Ceremony ) ကို တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
* Miba University မှ နှစ်စဉ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား (Graduation Ceremony) ကိုလည်း တက်ရာက်နိုင်ပါသည်။
Contact Person - Win Sandar
Call NOW: 09 400 070 909, 09- 777 046 368, 09- 777 046 369
Address: Building (9), 1st Floor, MICT Park , Hlaing Township , Yangon , Myanmar.
UCSI University Master in Business Administration
UCSI University isavibrant community of learning with more than 10,000 students from 110 different countries, the University stands out asamelting pot of diversity and learners will supplement their pursuit of knowledge withakeen sense of cultural appreciation –avital trait in today’s borderless world. As one of Malaysia’s first private universities, UCSI University has long impacted the national higher education landscape and the University continues to do so with its wide range of undergraduate and postgraduate programmes. Ranked as Malaysia’s best private university in the QS World University Rankings 2019, placing it in the top 2% of all universities in the world. Ranked 442, UCSI is the only Malaysian private university in the top 500.
The UCSI University MBA programme is specially designed to provide access to higher learning opportunities for both local and international practitioners and professionals. UCSI University is the only Malaysian institution of higher learning to offerapostgraduate programme based on this framework. UCSI University incorporatesadiverse and exciting blended learning approach by imparting knowledge through workshops, presentations and case studies. UCSI University’s MBA programme is supported byateam of highly qualified academicians specialising in various sectors and equipped with extensive industry experience. The scope of studies also includes current developments and debates on business and management topics at both the theoretical and applied levels. Graduate students will be encouraged to conduct theoretical exercises on these topics and their relevance to actual practice, in particular their applicability to small and medium-sized enterprises and industries worldwide. Industrial practitioners and corporate consultants will be featured as speakers during the programme. Asagraduate programme, the MBA study promotes lifelong learning among learners to prepare them for internationalemployment opportunities, future career development and further research and study anywhere in the world.
•	Research Methods for Business and Management
•	Research PlanningSemester 3
•	Financial Management and Policy
•	Master Coursework Project
Plus one elective course chosen from the list below :
Contact Us Yangon Phone : 09420100712 , 09400070909, 09252228889 , Yangon Address : Building (9),1st Floor, MICT Park, Hlaing Township Email : [email protected] Mandalay Phone : 09426067979 Mandalay Address : Blk 1, Unit 3, Water Street, Mingalar Mandalay, 73rd Street, Chanmyatharzi Township Email : [email protected]